Zvapupu zvaJehovha muAfrica
Burundi: Nolla achiratidza magazini eNharireyomurindi kune varume vainge vamukumbira marasha
VANOGARAMO 1 082 464 150
VAPARIDZI 1 453 694
ZVIDZIDZO ZVEBHAIBHERI 3 688 959
Benin: Désiré anoshandisa mudziyo unoridza marekodhi uri pamudhudhudhu wake pakuparidza mashoko akanaka kune
Mumaguta ari kumaodzanyemba kweBenin, vakawanda vanowanzotakura vanhu nemidhudhudhu yavanoti zem. Mumwe piyona webetsero anonzi Désiré akasungirira mudziyo unoridza marekodhi pamudhudhudhu wake uye akaisawo masipika maviri akatarisana nepanogara munhu waanenge akatakura. Anogara achiridza mabhuku akarekodhwa nemadhirama emuBhaibheri. Munhu paanongokwira pamudhudhudhu wake, anobva atotanga kuteerera zviri kuridzwa zvacho. Vakawanda vanonyatsoteerera zvekuti pavanosvika pavanenge vachiburukira, vanombononoka kana kutoramba kuburuka kusvikira rekodhi yacho yapera. Désiré anoti: “Ndizvo hazvo kuti ndinenge ndichida kuti vabhadhare voenda kuitira kuti nditsvage imwe kasitoma, asi ndinoziva kuti kunzwa kwavanoita mashoko akanaka kunotokosha kupfuura mari. Uyewo zvinotoita kuti ndipe vanhu mabhuku akawanda.”
Kamwe kasikana kane makore 6 kanonzi Nolla, kanogara kumakomo ekuBurundi. Rimwe zuva mhuri yavo ichibikira pachitofu chidiki chemarasha, varume vaviri vakanga vachishanda paimba yakavakidzana navo vakakumbira marasha kuti vanobatidzawo moto wavo. Nolla, uyo asati ava kuenda kuchikoro ndiye aikuchidzira moto pakasvika varume vacho. Akavapawo marasha mashoma. Mushure menguva pfupi, Nolla akapfuura nepaiva nevarume vaya ndokuona kuti vakanga vashandisa marasha aye kubatidza mudzanga. Izvi hazvina kumufadza saka akavaudza kuti, “Dai ndazviziva kuti manga muchida kushandisa marasha acho kubatidza fodya ndingadai ndakunyimai.” Akabva ayeuka kuti akamboona magazini yaiva nemufananidzo wefodya kuImba yoUmambo. Akamhanya kuImba yoUmambo kunotora magazini maviri eNharireyomurindi yaJune 1, 2014, iyo yaitaura nezvekusvuta fodya. Nolla akadzoka akapa varume vaya magazini acho akavakurudzira kuti vabve vatoaverenga. Pava paya akavaona zvakare uye akavapa mapepa ekuvakoka kugungano remunharaunda raizoitwa nekukurumidza. Varume vacho vakashamiswa nekusimbirira kwaiitwa nekamusikana aka uye izvi zvakaita kuti vapinde mazuva maviri egungano racho. Panguva yekumbozorora masikati, Nolla akavaona uye akavakoka kuti vazodya vese nemhuri yavo. Zvavakaona nezvavakanzwa pagungano racho zvakavabaya mwoyo zvekuti vese vari vaviri vakatanga kudzidza Bhaibheri.
Vakuru vari muLiberia vari kuparidza mashoko eUmambo mumajeri ehurumende akasiyana-siyana. Mumwe piyona chaiye anonzi Yves uyo anogara muguta guru reMonrovia akati: “Muna March, vasungwa vatatu vakagadzwa kuva vaparidzi vasati vabhabhatidzwa. Izvi zvakaita kuti nhamba yevaparidzi vari paMonrovia Central Prison isvike pa6.” Vasungwa vacho vanoparidzira sei? “Vhiki rega rega vanoungana musi weChitatu neMugovera kuti vaite musangano webasa remumunda,” anodaro Yves. “Zvadaro, vanobva vapiwa mvumo yokuenda muchitokisi chimwe nechimwe vachiudza vamwe vasungwa mashoko emuBhaibheri anopa tariro.” Vasungwa vakawanda vari kunakidzwa nekudzidza Bhaibheri uye vari kupinda misangano iri kuitirwa pajeri ipapo. Mumiririri wehofisi yebazi akaenda kujeri kwacho ndokupa hurukuro yavose kuvasungwa 79. Makirasi ekudzidza Bhaibheri anogara achiitwawo kune mamwe majeri 6 uye vasungwa vakawanda vari kuchinja vachiva neunhu hwakanaka.
“Tinoda Chaizvo Kubatsirwa”
Pakashandwa nesimba kuti vanhu vanofarira vari munzvimbo dziri kwadzo dzoga vakwanise kupinda Chirangaridzo. Somuenzaniso, vanhu verudzi rwechiSan, avo vanonziwo maBushmen, ndivo vakatanga kugara kumaodzanyemba kweAfrica. Vaimborarama upenyu hwekungotama-tama vachivhima nekutsvaga michero yemusango. Mumwe piyona chaiye ari kuchamhembe kweNamibia anonzi Glenn, akaronga kuti Chirangaridzo cha2015 chiitirwe kune mumwe musha wevanhu vechiSan uri kwawo wega uyo uri makiromita 270 kumabvazuva kweRundu. Aka kakanga kava kechipiri Chirangaridzo chichiitirwa ikoko. PaChirangaridzo chekutanga nechechipiri, vatungamiriri vemunzvimbo iyoyo vakapa Zvapupu zvaJehovha mvumo yekuti zvishandise munotongerwa mhosva namejasitiriti zvisingabhadhare. Chirangaridzo chacho chakapindwa nevanhu 232 pasinei nekuti kwakanaya zvekunaya zviya chisati chatanga uye chiri pakati. MaBushmen anogara kunzvimbo iyi anotaura chiKhwe, mutauro une mashoko akawanda avanotaura vachiridza mukanwa. Hurukuro yeChirangaridzo yakashandurwa kubva muChirungu kuenda muchiKhwe. Sezvo kusina Bhaibheri rechiKhwe, pakashandiswa masiraidhi airatidzwa pamadziro pakutsanangura magwaro akadai saIsaya 35:5, 6. Glenn, uyo anodzidza Bhaibheri nevanhu vakawanda vari kufambira mberi munzvimbo iyoyo, akati: “Ndava nemakore maviri ndichiuya kuno kamwe chete pamwedzi. Pandinouya, ndinogara kwemazuva mashoma. Zviri kutora nguva kuti vanhu vafambire mberi pakunamata nekuti nzvimbo yacho iri kure uye mutauro wacho wakati omei. Tinoda chaizvo kubatsirwa. Pandakaenda kune vakuru vakuru vemunzvimbo yacho kuti tinogadzirira Chirangaridzo chegore rino, mumwe murume ari mukomiti inotungamirira nharaunda yacho akandikumbira kuti kana zvichiita tivake nzvimbo yekunamatira munzvimbo iyi. Akati komiti yacho yaizotipa nzvimbo yekuvakira uye yaizobhadhara mari dzaidiwa pakuvaka! Akati chavaingoda ndechekuti tivape ‘mufundisi’ kana kuti tidzidzise mumwe munhu wemunzvimbo yacho kuva mufundisi!”
Namibia: Vaparidzi vaviri vachinakidzwa nekuudza mukadzi werudzi rwechiHimba mashoko akanaka